“Waa Adiga shaqsiga Manchester United ka CEYRIYAY Jose Mourinho.”.- – Gool FM
“Waa Adiga shaqsiga Manchester United ka CEYRIYAY Jose Mourinho.”.-
(Manchester) 21 Dis 2018. Jose Mourinho ayaa Talaadadii laga ceyriyay kooxda Manchester United kaddib guul daradii Liverpool iyo waliba dagaal kala dhexeeyay ciyaartoyda kooxda badankooda.
Dhaliyaha Reds Xherdan Shaqiri ayaa iminka daaha ka rogay in qaar badan oo ka mid ah saaxiibadiisa ay ku eedeynayaan inuu isagu sabab u yahay in macalinka reer Portugal laga ceyriyo gegada Old Trafford.
Shaqiri oo badel ku yimid ciyaarta oo 1-1 ayaa dhaliyay labada gool ee lagu quusiyay Red Devils isagoona ciyaarta ka dhigay 3-1.
“Fariimo badan ayaa Asxaabteyda iga soo gaartay markii Man United laga ceyriyay Mourinho,” sidaa ayuu hadalkiisa ku bilaabay mar uu u waramayay The Guardian.
“Waxay ahaayeen fariimo badan oo fiican oo ku aadan kulankii Man United, laakiin intaa kaddib markii ay soo ifbaxday akhbaarta in la ceyriyay Mourinho, waxaa i soo gaarayay Fariimo leh: ‘Adiga dartaa ayaa loo ceyriyay’ laakiin tani waa kubbada cagta.
“Ma aaminsani in guushii aan ka gaarnay United darteed loo badelay tababaraha.
“Waxaa jira sababo kale laakiin kulanku wuxuu galay taariikhda. sidoo kalena waxay had iyo jeer ku qornaan doontaa buugeyga Taariikhda.”.
Ronaldo oo ka bad-baaday Xabsi balse waxaa qoorta loo suray......
Looma Kala Harin Daawashada Koobkii Adduunka ??…iyadoona FIFA ay Shaacisay Daawadayaasha Dhacdadii lagu Qabtay Dhaawan Russia